मनोरञ्जन Archives - Sawal Nepal
अभिनेत्री प्रियंका कार्की अहिलेकी चर्चित अभिनेत्री मध्य एक हुन् । विभिन्न कारणले चर्चामा आइरहन रुचाउने उनी सामाजिक सञ्जालमा निकै नै सक्रिय रहने गर्दछन् । नेपाली चलचित्र जगतकी प्रख्यात नायिका प्रियंका कार्की गर्भावस्थामा निकै चर्चित बनिन् ।
काठमाडौं । रियालिटी शो कमेडी च्याम्पियन २ का विजेताहरु सम्मानित भएका छन् । टिभिएस मोटर साइकलका तर्फबाट कमेडी च्याम्पियन २ का विजेता भरतमणि पौडेल, फस्ट रनरअप विक्की अग्रवाल र सेकेण्ड रनरअप सन्तोष थापालाई सम्मानित गरेको हो । भृकुटीमण्डपमा जारी टिभिएस मोटर साइकलको प्रदर्शनीका अवसरमा मंगलवार मिट एण्ड ग्रीट कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा आफूहरुलाई
‘महानायक को ?’ यो विषयमा केही अगाडि चर्को बहस भयो । कतिले महानायकको रूपमा अभिनेता राजेश हमालको वकालत गरे भने कतिले किन र के कारणले हमाल महानायक हुन् भन्दै प्रश्न उठाए । केही हमालको अभिनय क्षेत्रप्रतिको लगावलाई लिएर महानायक मान्न तयार पनि थिए भने कतिले त उनी सामाजिक हुन नसकेको, उनका राम्रो फिल्मको संख्या नभएको
शिल्पा शेट्टीका श्रीमान राज कुन्द्रा रिहा
एजेन्सी । पोर्नोग्राफीसम्बन्धी मुद्दामा भारतीय व्यवसायी राज कुन्द्रा धरौटीमा रिहा भएका छन् । मुम्बईको एक अदालतले ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा कुन्द्रालाई रिहा गरेको बीबीसीले जनाएको छ । मुम्बई प्रहरीको क्राइम ब्रान्चमा २०२१ को फेब्रुअरीमा दर्ता भएको घटनामा अनुसन्धान गरेर कुन्द्रालाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले कुन्द्रलाई पक्राउ गर्ने पर्याप्त सबुत भएको दाबी गरेको थियो ।
गायिका रचना रिमाल र गायक राजु अर्यालको आवाजमा रहेको ” फुलबुट्टे चोली ” गीतको कभर भिडियो सार्वजनिक भएको छ । मायालु प्रेमी प्रेमीका विचको प्रेमका भावहरुलाई गीतमा समेटिएको छ । अशोक अर्याल र राजेश पौडेलको शब्द तथा कृष्ण बाजुरालीको संगीत संयोजन गीतमा समावेश गरिएको छ । निकै उत्कृष्ट तरिकाले अडियोलाई निमार्ण गरिएको छ । नविन
शंकर अधिकारी घायलको लेखन÷ निर्देशन र प्रस्तुति रहेको चलचित्रको गीत सार्वजनिक भएको हो । माया र प्रेमलाई गीतमा समेटिएको छ । प्रहलाद तिम्सिना र नित्या शिवाको गीतमा स्वर रहेको छ । राहुल जेटली र प्रीतिका शर्मा मा फिचरिङ गरिएको गीत लाई नुवाकोटको रमणिय दृश्य हरुमा छायांकन गरिएको छ । बिबन तामाङ र दस बहादुर तामाङ
करिब डेढ बर्षपछि मिडियामाझ प्रस्तुत भएका नेपाली चलचित्रका चर्चित नायक अनमोल केसीले अब आफूलाई सिनियर रुपमा प्रस्तुत हुन मन लागेको बताएका छन् । आफ्नो पिता भुवन केसीको जन्मदिनमा आयोजित एक कार्यक्रममा पुगेका अनमोलले मिडियासँग कुरा गर्दै पर्दामा चकलेटी अवतार धेरै भएको भन्दै अब दर्शकमाझ नयाँ तरिकाले प्रस्तुत हुने बताए । अनमोल मल्टिस्टारर चलचित्र ‘एक्स ९’मा
शनिबार मध्य राति सम्पन्न कमेडी रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन २’को विजेता भरतमणि पौडेलले आफुलाई विजेता बनाउन सहयोग र साथ दिने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । विजेता घोषणा भएको केही घण्टापछि सामाजिक संजालमा एक पोष्ट गर्दै पौडेलले यो जित आफ्नो मात्र नभएर सबैको भएको बताएका हुन् । सबै प्रिय भगवानरुपि दर्शक तथा समर्थकमा नमस्कार
‘भ्वाइस अफ नेपाल -३’ बिजेता किरणको चौतर्फी चर्चा, अमेरिकामा सम्मान गरिँदै
काठमाडौँ । भ्वाइस अफ नेपाल सिजन थ्रिका बिजेता किरण गजमेरलाई अमेरिकामा सम्मान गरिने भएको छ । हिमालयन म्यूजिक एकेडेमीको आयोजनामा अमेरिकामा नर्थ हिल म्यूजिक फेस्टिबलको आयोजनामा गरिने मेलामा किरणले नेपाली भाषा संस्कृति र गीत संगीतको प्रचार प्रसारमा ठूलो योगदान पुर्याएको भन्दै एकेडेमीले सम्मान गर्न लागेको हो । शनिबार एक्रोन ओहायोमा हुन लागेको कार्यक्रममा नेपालीका अलावा
के के बेफाइदा हुन्छ राम्री युवतीसँग विवाह गर्दा ?[ हेर्नुहोस ]
प्रायः पुरुष सुन्दर युवतीसँग नै विवाह गर्न चाहन्छन् । गोरो वर्णकी युवतीमाथि धेरैको नजर जान्छ । घर परिवारले पनि राम्री युवतीसँग नै विवाह गराउन चाहन्छ । बाहिर हेर्दा सुन्दर देखिएकी युवतीमा सर्वगुण सम्पन्न हुनु आवश्यक ठान्दैनन । उनीहरुको स्वभाव, आनीबानी र गुण अवगुणको बारेमा त झन् सोच्दैनन त्यसैले पछि पछुताउनु पर्छ । युवतीको सुन्दरता मात्र
आज दिन भरि के के भयो ? हेर्नुहोस
भोलि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन्छ : प्रवक्ता महरा
रोल्पामा भीरबाट खसेको ढुङ्गा लाग्दा आमा-छोरीको मृत्यु